२०७६ जेष्ठ १३, सोमबार १५:३१ गते
रोल्पा समाचारदाता on २०७६ जेष्ठ १३, सोमबार १५:३१ गते
सम्पादक, रोल्पा समाचार साप्ताहिक
१७ औँ स्मृति दिवकको अवसरमा
नेपालमा परिवर्तनको आन्दोलन जनयुद्धले निकै गति लिइरहेको थियो । माओवादी जनयुद्धबाट सरकार निकै अत्तालिएको थियो । त्यही बेलामा नेपालमा चलिरहेको जनयुद्धलाई दवाउनको लागि २०५८ साल मंसिर ११ गते कांग्रेस नेता शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले देशमा संकटकालको घोषणा गरे लगतै गोविन्द आचार्य लगायत दजनौँ जनपक्षीय पत्रकारहहरुलाई पक्राउ गरि जेल चलान ग¥यो तत्कालीन सरकारकाले । सेनलाई पनि आत्मसमर्पन गराउनको लागि याताना दियो । तर उहाँले आफ्नो विचार, आस्थालाई ढल्न नदिन बरु मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । त्यही मृत्यु स्वीकारै गर्दा आरोपमा हिरासतभित्रै २०५९ साल जेठ १३ गते विभत्स हत्या गरियो । कृष्णसेन इन्छुकले जीवन बलिदान गरेको आज १७ वर्ष भइसक्यो ।
नेपाली जनपक्षिय परिवर्तनकारी पत्रकारिता क्षेत्रका अग्रज एवं हाम्रा आदर्शपात्र पत्रकार कृष्ण सेन ‘‘इच्छुक’ आज हाम्रो सामु हुनुहुन्न । जनपक्षिय कलमजीवी पत्रकार एवं साहित्य क्षेत्रका आदरणीय आदर्श पात्र कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को यस धर्तीबाट तत्कालीन राज्य पक्षबाट ज्यान लिएको १७ आँै बसन्तहरु वितेको छ । वर्तमानको यस घडीसम्म १७ पटक विरुवाहरुले पालुवा फेरि सके, १७ औँ वसन्तहरु फेरिसके, तर सेन लगायत तमाम सहिदरुको महान सपनाहरु पूरा भएका छैनन् । यतिबेला १७ औँ स्मृति दिवसको सन्दर्भमा मलाई केही कुरा लेख्न मन लागेको छ । वर्तमान समयको नेपाली पत्रकारिता र सेनको जीवनका आदर्शलाई हामीले कतिको पकड्न सक्यौं वा सकेनौँ यो एउटा समीक्षा विषय हो । तर आजको यो वर्तमान समयमा कृष्ण सेनका आदर्श विचार र क्रान्तिकारी निडरपन, धैर्यता, निर्भिकता र अविलनको आवश्यकता भने खड्कीएको छ ।
कृष्ण सेनलाई २०५९ साल जेठ १३ गते मारिएको थियो । कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ नेपाली पत्रकरिताक्षेत्रका जनपक्षीय पत्रकार हुनुहुन्छ । उहाँले उठाएका आवाज, नेपाली जनजीवन, जनतन्त्र र जनजिविका सवालमा लेखिएका मुद्धाहरु अझै पूरा हुन सकेका छैनन । कृष्ण सेन जस्तो एउटा बहुप्रतिभा, नेपाल र नेपालीको जीवन परिवर्तन हुनुपर्दछ भन्ने नेपाली आमाका सच्चा सपुतको राज्यले सम्मान गर्न सक्नुपर्दथ्यो । इच्छुक कुनै पार्टी विशेषको विषयलाई प्राथमिकता दिएको थिएन । उसले त गाममा गमालीहरु नाङ्गै खुट्टामा तिमोर बोक्दै कोइलाबासमा नुन बोक्ने गएको कुरा, छोराको बलिदानले मानसिक चेत गुमाउनुभएका विर्शु सुनार, कर्णाली गरिव भएको कुरा लेखेको थियो । उसले के अपराध नै गरेको थियो । उसले मानिसको हत्या गरेको थिए । राज्य विखण्डन पार्ने यात्रामा लागेको थिए केवल लेखे त इच्छुकले अभाव, गरिवहरुको कुरा । इच्छुकका सत्य आवाजलाई राज्यले संवोधन गर्न सक्नु पर्दछ छ सेनको जीवनलाई होइन सिंगो नेपाली जनताको जीवन । तर त्यसको विकल्पमा सेनको जीवन लिने दुशचत्रमा लाग्यो यो राज्य त्यसैले त भिमसेन थापाकोको ‘यो देश सत्यले सरापेको देश’ भन्न मलाई फेरी मन लाग्छ ।
हामी आज कृष्ण सेन लगायत हजारौँ शहीदहरुको बलिदानमा बाँचिरहेका छाँै । शहीदको वलिदानले नै हामी वर्तमानको घडीसम्म नेपाली भनेर बाँच्न पाएका छाँै । यदी तिनै महान शहीदहरुले बलिदान नगरेकोभए हामी यो सुखद समयमा आउन सक्ने थिएनाँै । म १७ औँ कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ दिवसको अबरमा जनपक्षीय पत्रकार एवं हाम्रा आदर्शपात्र आदणीय कलमी सेनानी कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ लगायत देश परिवर्तनको यात्रामा आफ्नो जीवन आहुती दिनुहुने तमाम महान शहीदहरुलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै जसले आफ्नो अंङ्गहरु गुमाई घाइते, अपाङ्ग हुनुभएको छ, बन्दी, बेपत्ता, बलात्कृत हुनुभएको छ उहाँहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । नेपाली पत्रकारितामा कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ को अझै आवश्यता रहेको छ । पत्रकारिता पेशा दिन दिनै दयनीय बन्दै गइरहेको छ । यसमा पत्रकारितामा लागेका मानिसहरु पनि केही श्रेय लिनुपर्दछ । केही राज्यका कारणले पनि भइरहेका छन् । संक्रमणकालीन समयलाई स्थायित्व दिन सकिरहेका छैनन् । हामीले आफ्नो पेशालाई मर्यादित बनाउनको हामी आफै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । आज नेपाली पत्रकारिता सकरात्मक भन्दा नकरात्मकता विषयलाई बढी प्राथमिकता दिनु, आवाज विहीनको आवाज भन्दा बोलवालहरुको मिडिया बनाउनु, सञ्चारकर्मीको सामाचार लेख्ने भन्दा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा बढी व्यस्त रहनु लगायतका रहेका छन् । यो एउटा समिक्षाको विषय हो । त्यस्तै मिडियाहरु पनि सामाजिक हितका लागि भन्दा पार्टी, समूह, कार्यालय, व्यक्ति लगायतको सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नु, मिडियालाई मिडियाका रुपमा भन्दा पनि प्रचारकर्ताको रुपमा अगाडि बढ्नु लगायतका हुन् । मिडियाहरु पनि घटनाको सत्य कुरा एकातिर हुदाँ हुदँै पनि आफ्नो राजनीतिक दर्शनको आधारमा विभाजित हुने । राजनीतिक दर्शणका आधारमा विभाजित हुने एउटा सन्दर्भ होला तर हाम्रो पेशालाई मर्यादित बनाउन जरुरी छ । हाम्रो पत्रकारिता पेशामा जसरी कुकुरले मानिस तोकेको भन्दा मानिसले कुकुरलाई तोकेमा मात्रै समाचार बन्दछ भन्ने परम्परागत मान्यताबाट फड्को मारि अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
मलाई पार्टीले सञ्चार क्षेत्रको जिम्मा दिएको थियो । करिव कक्षा ८ मा अध्ययन गर्दा गर्दै पत्रकारिताको मैलानमा हाम फाल्नै पर्ने वाध्यता भयो । त्यो आफ्नो पार्टी संगठनले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा मैले कृष्ण सेनको पुस्तहरु अध्यन गरेको थिए । त्यसै कारणले पनि पनि कृष्ण सेनको त्यो विचार र दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएको थिए । मैले पत्रकारिताको जीवनको शुरुवात गर्ने बेलामा कृष्ण सेनको शाहदत भइसकेको थियो । २०६१ सालमा रोल्पाको इरिबाङमा क्रान्तिकारी पत्रकार संघ नेपाल गठनको बेलामा पनि सेनकै निकै चर्चा भयो । त्यसबाट म अझै प्रभावित भए । उहाँकै विचार र भावना अनि दृष्टिकोणको आधारमा मेरो पत्रकारिता यात्राको शुरुवात भयो । त्यसपछि मलाई हाम्रो बुवा लछुमन विक र आमा रुपशिला विश्वकर्माले जन्म दिनुभयो । अनि पढाउनुभयो । आफ्नो गास र कपास काटेर भए पनि म लगायत हाम्रो परिवारलाई पढाउनुभयो । पछि जनयुद्धमा लाग्नका लागि पनि बुवा लछुमन विश्वकर्मा र आमा रुपशिला विश्वकर्मा लगायत सबै परिवारको साथ रह्यो । नाबालक हुने बेलामै बुवा र आमाले जनयुद्धमा जानका लागि कुनै रोक तोक गर्नुभएन बरु सहयोग गर्नुभयो । बुवाको ७४ वर्षको उमेरमा २०७४ साल असोज ४ गने निधन भयो । उहाँको सुद्धकार्य असोज ८ गते सम्पन्न भएको थियो । त्यसमा हामीले एक कम्युनिष्ट विचार भएका हाम्रो बुवाको शोक सभा पनि प्रगतिशील प्रकारले नै सम्पन्न गरेका थियौँ । त्यतिबेला हामीले दुइवटा सामाजिक कार्य गर्ने परिवारको सल्लाह भयो । म पनि माध्यमिक तहसम्म विद्यालयमा अध्ययन गरेको थिए । म पनि विद्यालय प्रथम आउने विद्यार्थी अनि मा.वि. श्री सिद्ध कैलास प्र.मा.वि. कोर्चाबाङ मिसिडाँडामा ३० हजारको अक्षयकोष स्थापना र रोल्पा जिल्लामा रहेर वा रोल्पा जिल्लामा जन्मिएर जुनसुकै स्थानमा पनि पत्रकारिता गरिरहेकाहरुलाई सम्मान गर्ने गरी १ लाख रुपैयाको अक्षयकोष स्थापना गर्ने र सो मुलधनबाट आउने मुद्धतीबाट आउने व्याज रकमबाट सम्मान गर्ने गरी ‘लछुमन÷कृष्ण सेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता कोष २०७५’ स्थापना गरिएको हो । यो कृष्ण सेनको हत्या भएको दिनमा नै नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पा शाखाले एक औपचारिक कार्यक्रम गरी प्रदान गर्ने गरिन्छ । गतसाल रोल्पा जिल्लाका अग्रज पत्रकार दयाराम डाँगी र यस वर्ष सनस्टार राष्ट्रिय साप्ताहिका सम्पादक एवं नयाँ पत्रिकाका सम्वादाता नविन लोचन मगरलाई सम्मान गरिएको छ ।
कृष्ण सेनको १७ औँ स्मृति र हाम्रो बुवा लछुमनको विश्वकर्माको स्मृतिमा स्थापना गरिएको छ । कृष्ण सेन र हाम्रो बुवा लछुमन विश्वकर्मा श्रद्धा सुनम व्यक्त गर्दछु । हामीलाई जन्म दिनुहुने स्व. बुवा र मलाई विचार पत्रकारिता पेशामा आउनका लागि प्रेरणा प्रदान गर्ने कृष्ण सेनको सपना पूरा गर्ने र निरन्र अन्याय, अत्यचार, शोषण दमनको विरुद्धमा लाग्ने प्रवितद्धता म लगायत हाम्रो परिवार निरनन्तर लाग्नेछौँ ।
आज कृष्ण सेन हामी सबै नेपाल र नेपालीका साझा बनेका छन् । एउटा विचार समूहको मात्रै भन्दा पनि सिंगो राष्ट्र र जनताले सम्मान गर्ने भएको छ । यी प्रतिभाको धनी कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ लाई राज्यले वेलैमा चिन्न सकेन । तर, पनि हाल कृष्ण सेन इच्छुक प्रतिष्ठान गठन गरि राष्ट्रिय शहीद मानेको छ । हामीले उहाँबाट जीवनभरी सर्वहारा जनता, भोका, नाङ्गा निमूखा, गरिव, असाय, अशक्त, श्रमजिवी, मजदुर वर्गको जीवनभरी कलमको माध्यमबाट पनि सेवा गर्न हामीले सिक्नै पर्दछ । अन्त्मा कृष्ण सेन बुवाप्रति लछुमनप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु ।
Author रोल्पा समाचारदाताPosted on २०७३ भाद्र १९, आईतवार ०१:४८ गते २०७३ भाद्र १९, आईतवार ०२:०५ गते
–हस्तबहादुर केसी विषयप्रवेश ः “क्रान्तिकारी कालमा तीब्ररूपले परिस्थितिमा बदलिन्छ, यदि बदलिएको परिस्थिति अनुसार क्रान्तिकारीहरूको ज्ञान तीब्ररूपले बदलिएन भने उनिहरूले आफ्नो क्रान्तिलाई...